I-Keith's Cottage-ihlaziyiwe, inelanga kwaye inomtsalane!
I-Keith's Cottage likhaya elisandula ukulungiswa elibekwe kwindawo enelanga nepholileyo yaseDerby, umgama nje omfutshane we-3 min ukukhwela ibhayisekile kunye neyona nto uphambili kuyo ukuze uhlole yonke into enokunikwa nguDerby. Yonwabela iimbono ezimangalisayo ezivela emantla ejongene nekhitshi exhobe ngokupheleleyo, kubandakanya umatshini wekofu yepod. Relax kwindawo yethu yokuphumla epholileyo ngomlilo weenkuni okanye usebenzise impompo enkulu yobushushu ukufudumeza / ukupholisa indlwana. Amagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elitsha kunye nendawo yokugcina ibhayisekile etshixwayo enewasha kunye nesomisi kunye nendlu yangasese yesibini ngaphandle.
Indlu encinci ibizwa ngegama likaKeith, omnye wabahlali bakudala kunye nabade kakhulu eDerby. Ikhaya lakhe elihle libuyiselwe ngothando ngathi ukuba silisebenzise kwaye sabelane nosapho, abahlobo kunye nabanye abanqwenela ukonwabela ulonwabo lwaseDerby. Ithala leencwadi elimangalisayo lisekho kwaye siyathemba ukuba ungabuxabisa ubomi awayebuphila ukuba unqwenela ukuzama ukusebenzisa i-loo ngaphandle !! Singakwazisa ngovuyo ukuba ngoku kukho igumbi lokuhlambela elitsha elithandekayo elinebhafu, ishawa kunye nendlu yangasese! Sinomatshini omtsha wokuhlamba ngaphakathi owempahla yakho kwaye kwishedi yebhayisekile kukho umatshini wokuhlamba wazo zonke izixhobo zokukhwela kunye nesomisi. Iisilingi ezintle eziphakamileyo kunye neempawu zokuqala zenza le ndlu ibe nomtsalane kwaye imnandi.
Indawo yokusela egqwesileyo eTasmania, iDorset Hotel (kwi-asap yencwadi yokutya) Ukonwaba kwiindledlana zawo onke amanqanaba okukwazi ukukhwela. Ukuba awukukhweli ngoko zama isandla sakho ekuthengeni isafire, irubhi kunye netopazi kumlambo iWeld (iMoorina inendawo yokukhwela abantu kwimizuzu eli-10 ukusuka eDerby) Indlu yangasese ingaphezu kwendlela entsha eya eBranxholm.
Inombolo yomthetho: PLA/2020/131